Uzovela enkantolo owabulala izithandani ngomkhonto engaphandle ngoshwele | isiZulu
Uzovela enkantolo owabulala izithandani ngomkhonto engaphandle ngoshwele
Uzovela enkantolo owesifazane otholakale no-R6.7m esikhwameni, e-airport
Uzovela enkantolo owesifazane ozame ukubulala usana lwakhe olusanda kuzalwa
Kuboshwe iphoyisa laseLimpopo ngamacala enkohlakalo
Durban - Uzovela okwesibili eNkantolo yeMantshi yasoBombo owesilisa waseHluhluwe ngoLwesithathu njengoba ebhekene namacala amabili okubulala nokuqala umlilo ngamabomu.
UPitol Zamani Gumede, 26, wagqunywa esitokisini ngemuva kokuvela okokuqala enkantolo ngomhlaka-23 Janiwari nonyaka.
"Ngomhlaka-26 Disemba 2017 ebusuku, izisulu ezimbilo oMzamo Mbuyazi, 20, nentombi yakhe uSibongile Ntshangase, 32, babelapho behlala khona eMduku, khona eHluhluwe, ngesikhathi behlaselwa ngumsolwa," kusho isitatimende samaphoyisa aKwaZulu-Natal.
Kuthiwa umsolwa wabe esegwaza lezi zithandani ngomkhonto wase okhela umuzi wazo ngomlilo, ziphakathi.
"Zombili izisulu zashonela endaweni yesigameko kwase kuvulwa amacala amabili okubulala nelokuqala umlilo ngamabomu. Abaseshi bakwazi ukwenza uphenyo olunzulu, zagcina zimkhalelile umsolwa," kuqhuba isitatimende.
Amaphoyisa athola ummese nomkhonto okusolakala ukuthi kwasetshenziswa kulesi sigameko.
Kwabe sekuvela ukuthi umsolwa wake wagwetshelwa ukudlwengula ngaphambilini wabe esededelwa ngebheyili. "Kuthiwa umsolwa ubulale lezi zisulu ngenxa yomona," kusho isitatimende.
Ibamba likaKhomishana wamaPhoyisa KwaZulu-Natal, uMajor General Bheki Langa, ukushayele ihlombe ukuboshwa okube ngumsebenzi wamaphoyisa aseHluhluwe.
"Ngiyasigxeka kakhulu isihluku esitshengiswe ngumsolwa. Ukuziphatha okunje akwamukelekile kanti amaphoyisa azosebenza ngokungakhathali ekuphenyeni leli cala kuphinde kuqinisekiswe nokuthi umsolwa liyamgojela icala," esho.